Ny lahatsoratr'i Kelsey Cox momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Kelsey Cox
Tsy asa mora ny mamorona atiny tena tian'ny olona vakina, indrindra fa ny atiny dia faritra iray manjaka hatrany ny kalitao noho ny habetsahana. Amin'ireo mpanjifa tototry ny atiny be dia be isan'andro, ahoana no ahafahanao mampiavaka anao mihoatra ny ambiny? Ny fandaniana fotoana hihainoana ny mpanjifanao dia hanampy anao hamorona atiny izay mifanaraka amin'izy ireo. Raha 26% ny mpivarotra no mampiasa ny hevitry ny mpanjifa mba hibaiko ny atiny
Na inona na inona karazana atiny noforoninao, ny bilaoginao no tokony ho ivon'ny marketing amin'ny atiny rehetra. Fa ahoana no ahazoanao antoka fa napetraka ny rafi-pitabatabana afovoany mba hahombiazany? Soa ihany, misy fika tsotra sasany izay hampitombo ny fizarana ary hiantoka ny fahafantaran'ny mpanaraka anao izay tokony hataony manaraka. Azo antoka izao ny milaza fa ny olona dia tia sary. Raha ny marina dia mihoatra ny 2x ny lahatsoratra misy sary
Na dia amin'ny Tompondaka Erantany aza tsy misy afa-tsy mpandresy iray ihany, orinasa maro no afaka miaina fahombiazana amin'ny lalao e-Varotra. Misy tetika voaporofo izay nanampy tamin'ny isa azon'ny mpivarotra. Baynote dia mampiseho aminao ny fomba fametrahana ireo mpilalao mahay indrindra ary mamorona drafitra lalao mavitrika mba hahafahan'ny orinasanao e-Commerce mitondra fandresena mody. Alohan'ny hanombohan'ny vanim-potoana, ny ekipa dia tokony hampiasa vola amin'ny mpilalao voalohany. Raha resaka e-Varotra 5 amin'ny
Mandany 83 andro isan-taona amin'ny fandefasana imailaka ianao
Alakamisy, Jolay 3, 2014 Zoma, Jolay 4, 2014 Kelsey Cox
Ny salanisan'ny mpivarotra dia mitrandraka ora maherin'ny 2,000 isan-taona amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra, amin'ny ankamaroan'ny asa manokana (39%) sy ny famakiana / famaliana imailaka (28%). Na dia toa lasa nanjary fomba fampahalalam-baovao malaza indrindra aza ny haino aman-jery sosialy, satria ny 72% -n'ny orinasa izao dia mampiasa haino aman-jery sosialy amin'ny endriny sasany, ny mailaka kosa no mbola lohalaharana amin'ireo mpandraharaha manerantany. Araka ny tatitry ny Institut Institute an'ny McKinsey Global Institute, dia mailaka 87 miliara no voarafitra isan'andro. An'ny Amerikanina